का. राजदूत पाण्डे सँगको बार्तलाब
अष्ट्रेलियाका लागि कार्यवाहक राजदूत राजेन्द्र पाण्डेसँग नेपाली भिजनका लागि राजेश्वर घिमिरेले दूतावास परिसरमा गरेका संक्षिप्त कुराकानी :
राहदानी वितरणमा निकै जन गुनासो थियो तर अन्तमा तपाईहरुले वितरण व्यवस्थित बनाउन सफल हुनु भयो भन्ने प्रतिकृया प्राप्त भयो । कसरी व्यवस्थापन गर्न सफल हुनु भयो ?
हो । हामीलाई राहदानी वितरणमा निक्कै जनगुनासो प्राप्त भएको थियो । कतिपय कुराहरु चाहँदा चाहँदै पनि समयमा गर्न नसकेकोमा हामी दुःखी छौ तर हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्याँै र ढीलालाई चुस्त बनायौँ र परिणाम स्वरुप ग्राहकवर्ग लाभान्वित हुनु भयो ।
एम्बेसीले फोन नै उठाउँदैन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
हो । कर्मचारीको अभावमा फोन प्रायः उठाउन सकिंदैन थियो तर जन गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै हाल फोन अपरेट गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । अब फोन उठ्छ तथा हामी प्राप्त ईमलहरुको पनि रेस्पोन्स गर्नेछौं । अब गुनासो आउने छैन ।
दूतावासको अन्य सुविधाहरुलाई पनि अनलाईन संचालन गर्ने योजना छ ?
यस विषयमा विस्तारै जन सुझाव अनुरुप काम गर्ने छु ।
नेपाली समुदाय बढ्दै जाँदा हामी भित्रको समस्याहरु पनि बढ्दै छ । यसलाई दुतावासले कसरी हेर्दै छ ?
हामीले अहिलेसम्म एनआरएनएलाई नै मान्यता प्राप्त संस्थाको रुपमा हेर्दै आइरहेका छौँ । एनआरएनए संग मिलेर नेपालीहरुको समस्या समाधानमा म जहिले पनि अग्रसर हुनेछु ।
यहाँ बढ्दो नेपाली संघ–संस्थाहरुको अभिलेख र विश्वसनीयता कायम गर्न के गर्नु पर्ला ?
म कमसेकम यहाँ दर्ता भएका संघ–संस्था दूतावासमा पनि दर्ता गर्न सकिने कुनै संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग कुरा गर्ने योजनामा छु । सायद यो कुरालाई व्यवस्थित गराउने कार्य शुरु भएपछि हामीलाई सहयोग प्राप्त हुने नै छ ।
अन्य देशको दुतावासले जस्तो आम नागरिकलाई भरोसा दिन सक्ने गरी नेपाली दुतावासले कार्य गर्ने वातावरण कहिले बन्ला ?
कार्यवाहक रहेर मैले गर्न सक्ने जिम्मेवारी मैले पुरा गर्ने नै छु । सबै मिलेर काम गरियो भने पक्कै राम्रो काम गर्न सकिन्छ ।
कार्यवाहक भएर काम गर्न कति सजिलो छ ?
मैले आफुले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्ने पूर्ण कोशीस गरेको छु । सायद नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनेनै छ ।
अन्तमा केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
म आउँदै गरेको बडा दशैँको यहाँ अष्ट्रेलियाका सम्पूर्ण नेपाली समुदायमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना दुतावासको तर्फबाट तथा व्यक्तिगत तर्फबाट पनि दिन चाहन्छु । सबैको घरमा खुशी छाओस् ।